फोरम नेता अभिषेकप्रताप शाहले पार्टीलाई दिए स्पष्टीकरण
Home / स्थानीय समाचार / POLITICS / फोरम नेता अभिषेकप्रताप शाहले पार्टीलाई दिए स्पष्टीकरण
नई उम्मीद December 18, 2016	POLITICS, स्थानीय समाचार5Comments 8,336 Views
MJF leader Abhisek Pratab shah
१८ डिसेम्बर,२०१६;मधेसी जनाधिकर फोरम का उप महासचिब ले केहि दिन पहिले फेस बूक स्टाटस र काठमाडौं टुडे पत्रिकामा प्रकाशित सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु बारे पार्टीले सोधेको लिखित जवाफ नेता साहमा ले यसरी स्पष्टीकरण बुझाएका छन ।
१) तपाईले आफनो फेसबुक स्टाटस्मा ‘बस करो मधेसी नेता अब आओ वापस मधेस, बंद करो दाना पानी तेल और माँगो अलग राष्ट्र मधेस’ र यस सम्बन्धी काठमाडौं टुडे पत्रिकाको अन्तवार्तामा यी अभिव्यक्तिहरु दिनु भएको साँचो हो ?
माथिको वाक्यांश मैले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको कुरा सही हो । त्यो मेरो नितान्त व्यक्ति विचार हो, सो मेरो पार्टीको धारणा वा रोडम्याप हो भन्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन । संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको उपभोग गरेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले समेत सबैलाई आफ्नो मत तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ, यो अधिकारमा व्यक्तिलाई मत कसैको हस्तक्षेपविना मत राख्न पाउने र कुनै सञ्चार माध्यम वा सीमाको छेकवारविना सूचना तथा विचार चाहने, प्राप्त गर्ने तथा अर्कालाई अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ भने व्यवस्था गरेको छ । यसकारण अभिव्यत्ति स्वतन्त्रताको हकको उपभोग मैले मेरो विचार फेसबुक मार्फत अभिव्यत गरेको हुँ । त्यसमा पनि म जस्तो जनताको प्रत्यक्ष मतवाट निर्वाचित सँसादले जनताको मनोभावना व्यत गर्नु आफनो परम कर्तवय समेत रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । जनताको भावनालाई बेवास्ता गर्दा आगामी दिनमा मलाई र पार्टीसमेतलाई राजनीतिक क्षति हुने अवस्था रहेकोे ले मैले सो अभिव्त्ति दिएको हुँ । वारम्वार कति चोटी लडने जति लडे पनि यँहाका शासक वर्ग केही दिन मुडमा देख्दिैनन् । मधेसीको इच्छा अकांक्षालाई नजरअन्दाज गर्नु पनि राष्ट्रिय एकता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ । यसकारण मैले भै गो अब आफनो मधेश लिउँ लेखेको हुँ ।
२) यदी साँचो हो भने अम¥यादित–अराजनीतिक शव्दहरुको अभिव्यक्तिले हाम्रो सिंगो पार्टीको मर्यादामा आँच पुग्दैन ? मधेस टुक्रिन्छ, छुट्टै देश हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति हाम्रो पार्टीको नीति विपरित भएन र ?
मैले विशुद्ध राजनीतिक तथा मर्यादित शब्दहरुको प्रयोग गरी आफ्नो पार्टीको विचार नभई आफ्नो व्यक्तिगत विचार दिएको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एउटा आधार स्तम्भ हो, जसमाथि लोकतान्त्रिक समाज टिकेको हुन्छ । सार्वजनिक अभिमत निर्माणको लागि यो अनिवार्य छ । यो भन्न सकिन्छ कि जुन दलमा नेताले आफना विचार स्वतन्त्र रुपले राख्न सक्दैनन् त्यो दल वास्तविक रुपमा लोकतान्त्रीक दल होइन । मेरो अभिव्यत्तिले हाम्रो सिंगो पार्टीको मर्यादामा काँहा आँच पुगेको छ, त्यस्को ठोस प्रमाण भए पाँउ । कति ठाउँमा मेरो फेसबुक स्टेटसले हिंसा भडकायो र अराजकता फैलायो त्यसको विवरण भए म सजाय भोग्न तयार छु । लिखित शब्दहरुले जव सांघातिक प्रवृति देखाउँछ वा हिंसा भडकाउँ छ भने त्यो अवस्थामा मात्रै सार्वजनिक व्यवस्थाको पालनाको लागि त्यस्तो कार्य रोक्न हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ । नभए म जस्तो पार्टिको सच्चा पहरेदारलाई विना कुनै आधार र प्रमाण विना नै आरोप लगाउन मिल्दैन । अभिव्यत्ति स्वतन्त्रताको बिषयमा तब मात्र कारवाही गर्ने कुराको आधार तब प्राप्त हुन्छ, जब त्यस्तो अभिव्यत्ति वा लेखाइले हिंसा भड्काउ छ । मेरो फेसभुक स्टाटस मेरो क्षेत्र र सम्मपूर्ण मधेशको जनताको आक्रोश अभिव्यत्ति हो । यसकारण मैले जनताको भावनानुसार नै जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले आफ्ना कुराहरु राखेको हुँ र मेरा कुराहरु पार्टीको नीति र सिद्धान्त विपरीत नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
३) हाम्रो पार्टीले उठाईरहेको मुद्दाहरुलाई गाइड गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त, नीति र विचार छ । यसले पार्टीलाई मार्गदर्शन गरी रहेको छ । के तपाईलाई पार्टी नीति, सिद्धान्त र विचार प्रति विश्वास छैन ?
हो, हाम्रो पार्टीले उठाइरहेको मुद्दाहरुलाई गाइड गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त, नीति र विचार रहेको छ । पार्टीको उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त, नीति र विचारप्रति विश्वास गर्दै पुर्ण रुपमा पालना गर्दै समेत आइरहेको छु । पार्टी पदीय हैसियतमा रही आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तको विपरित हुने गरी कुनै पनि कार्य गरेको छैन र गर्ने पनि छैन । साथै प्रत्यक्ष निर्वा्चित जनप्रतिनिधिको हैसियतले मेरा प्राथमिक जिम्मेबारी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताप्रति रहने व्यहोरा मैले यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्ने छैन ।
४) तपाईको माथिका अभिव्यक्तिहरु पार्टीको कार्य पद्दति, विधान र नियमावलीको उल्लंघन भएको छ कि छैन ? छ भने तपाई माथि अनुशासनको कार्वाही किन नगर्ने ?
मधेशी जनताको भावना र चाहना अनुरुपको भूमिका संघीय समाजवादी फोरमका हामी जस्ता जिम्मेवार कार्यकर्ताहरुले निर्वाह नगर्दा अरु कसैले मधेशमा अधिपत्य जमाउन सक्छ भन्ने तर्फ म सदैव सचेत रहेको हुनाले नै सो फेसबुब सटयाटस लेखेकु हुँ र पार्टी नेतृत्व पनि यस तथ्यप्रति सदा सचेत एवम् संवेदनशील रहने अपेक्षा गर्दछु ।
#abhisekpratapshah #mjf	2016-12-18
Tags #abhisekpratapshah #mjf
Previous “नेपाल संघिय समाजवादी पार्टी”को घोषणा
Next India will now provide scholarship to Bangladeshi students
फोरम नेता अभिषेकप्रताप शाहले पार्टीलाई दिए स्पष्टीकरण – नई उम्मीद
Simply desire to say your article is ass surprising. The clearness in your post is just nice andd i could assume you are an expert
on his subject. Fine withh your permission allow me to grab your feed to keep